के हो सबै भन्दा राम्रो पुस्तक पसलहरु मा युरोप | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > के हो सबै भन्दा राम्रो पुस्तक पसलहरु मा युरोप
त्यहाँ किन मान्छे यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ कारण प्रशस्त छन्. तपाईं अक्सर सुन्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिहरूलाई एक नयाँ र रोमाञ्चक छ क्षमता छ अनुभव. के यति यात्रा सुन्दर बनाउँछ फरक व्यक्तित्व फरक कुराहरू गरेर उत्तेजित गरिने छ. एड्रेनालाईन junkies सक्रिय लिन अवकाश, अलिकति खतरनाक परिस्थिति को thrill लागि देख. खाद्य रोमाञ्चक नयाँ स्वाद आफ्नो प्लेट प्रसन्न नयाँ ठाउँहरू भ्रमण. र यात्री बीच bookworms लागि, पुस्तकालयहरु र पुस्तक पसलहरु संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ हुन सक्छ. तपाईं युरोप मार्फत यात्रा र रेल द्वारा भ्रमण गर्न सबै भन्दा राम्रो पुस्तक युरोप मा स्टोर खोजिरहेको भने, हामी तपाईं को लागि केही सुझावहरू छन्:
फ्रान्स सर्वश्रेष्ठ बुक स्टोर – शेक्सपियर & कम्पनी, पेरिस
फ्रान्स एक रमणीय देश छ, र पेरिस यसको सबै भन्दा प्रसिद्ध गन्तव्य हो. कलात्मक प्रकार पेरिस विचार गर्दा, Notre Dame मनमा आउँछ, सुन्दर फोहराहरू र चेरी रूखहरू संग फूल. यसलाई जब तपाईं भ्रमण तपाईं पाउनुहुनेछ ठीक दृश्य छ शेक्सपियर & कम्पनी, along with fantastic ambiance of books inside.
धेरै ठूलो लेखकहरूले (अर्नेस्ट हेमिंग्वे र VOLTAIRE सहित) यो 17 औं शताब्दीमा निर्माण मा लिख ​​समय बिताएका छन्. को दृश्यहरु पुरानो समतल र पुस्तकहरू अप गरेको छ, सानो कोठा र nooks एक भीड मा स्ट्याक. पुस्तक पसलमा दुई फर्श भन्दा sprawls, र बाहिर बाट यो छ भन्दा धेरै सानो देखिन्छ. शेक्सपियर & कम्पनी पनि साँझ घटनाहरू र लेखक अध्ययनहरू होस्ट, जो साहित्य को कुनै प्रेमी सम्झना गर्नुपर्छ कुरा हो.
Acqua Alta पुस्तकालय, भेनिस
भेनिस सबैभन्दा मध्ये एक छ रोमान्टिक मा देख शहर इटाली, र यो युरोप मा सबै भन्दा प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पसलहरु को एक घर पनि छ. Libreria Acqua Alta राम्रो bathtubs मा पुस्तकहरु र पनि एक ट्रक भण्डारण लागि जानिन्छ. त्यहाँ पनि अन्य भण्डारण ठाउँ हुन्, यस्तो बाल्टिन र अन्य अस्थायी जहाजहरु रूपमा. यो पनि यसको पछाडि कौसी मा पुरानो पुस्तकहरू सम्पूर्ण बनाइएको सिँढी विशेषताहरु.
यसको सुन्दर भित्री संग, उच्च जल मा पुस्तकालय भेनिस पक्कै एक यात्रा लायक छ र कुनै पनि पुस्तक प्रेमी प्रसन्न हुनेछ. तपाईं आफैलाई लागि यो छ र भित्र हराएको प्राप्त चाहनुहुन्छ भने, यसलाई बिहान खोल्छ रूपमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ शर्त त्यहाँ बित्तिकै रहेको छ.
Selexyz डोमिनिकन चर्च बुक स्टोर, Maastricht
नेदरल्यान्ड मा Maastricht हरेक पर्यटक इच्छा सूची को शीर्ष मा हुन सक्छ. तथापि, तपाईं विशेष पुस्तक पसलहरू र पुस्तकहरू प्रेम यदि यो हुनुपर्छ. Dominicans वा यस शहर मा Selexyz डोमिनिकन चर्च एक 700 गोथिक को खास शैलीहरू निर्माण वर्ष पुरानो संरचना वास्तुकला.
यो भित्र मा बाहिर र minimalist मा मनोरम छ. Dominicanen कुनै पनि पुस्तक प्रेमी हृदय प्रसन्न हुनेछ भनेर शीर्षक एक भीड संग overflowing छ. तपाईं एक लो सक्नुहुन्छ कफी सँगैको क्याफे मा तपाईं एक पुस्तक पढ्न गर्दा. वैकल्पिक, तपाईं शीर्ष तल्ला देखि शानदार दृश्य आनन्द उठाउन सक्छौं.
Maastricht गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
आन्ट्वर्प Maastricht गाडिहरु गर्न
Maastricht गाडिहरु गर्न Liege
Charleroi Maastricht गाडिहरु गर्न
कुक & पुस्तक, ब्रसेल्स, Woluwe-सेन्ट-लैम्बर्ट
कुक & पुस्तक एक आकर्षक पुस्तक भण्डार छ र रेस्टुरेन्ट मा स्थित Woluwe-सेन्ट-लैम्बर्ट, बेल्जियम. जबकि धेरै राम्रो पुस्तक पसलहरु केही प्रस्ताव खाना र पेय, कुक & पुस्तक लिन्छ अवधारणा एक बिट थप. यो तपाईं विभिन्न पुस्तकहरू घेरिएको खानाको लागि तल बस्न अनुमति दिन्छ. त्यो यो राम्रो पुस्तकहरु र राम्रो खाना दुवै रमाइलो गर्न मन गर्नेहरूका लागि एक उत्कृष्ट स्थान बनाउँछ. के थप छ, यो तपाईं हरेक दिन अनुभव गर्न सक्छन् केहि छैन पक्कै पनि छ.
तयार भ्रमण गर्न सबै भन्दा राम्रो केही पुस्तक पसलहरु मा युरोप? तपाईं पेरिस र भेनिस गर्न रेल यात्रा गर्न सक्छन्, साथै नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियम रूपमा. आफ्नो टिकट बुक प्रारम्भिक र आफ्नो अर्को छुट्टी मा आफ्नो पुस्तक भोग योजना सुरु!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/charming-book-stores-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ /pl /गर्न ja वा /tr र अधिक भाषा.
#पुस्तक #पुस्तकहरू #bookstore #bookstores #traveleurope